Microsoft Windows dia mpandrindra milina amboarin'ny orinasa informatika Microsoft, izay natao ho an'ireo solosaina mahazaka PC. Io no mpandimby ny MS-DOS. Nanomboka tamin'ny taona 1990 ary indrindra indrindra tamin'ny fivoahan'ny Windows 95, nahita fahombiazana lehibe izy. Ny anisan'ny antony nahomby azy dia ireo fifanarahana nataony tamin'ireo mpanamboatra solosaina izay mandrara an'ireo mpanamboatra solosaina ireo mametraka mpandrindra milina hafa afatsy Microsoft Windows (raha tsy izany dia hiharan'ny sazy ara-bola). Efa napetraka eo amin'ny solosaina PC rehetra izay varotana Windows ; ary noho ny fifanarahana, tsy omen'ireo mpanao solosaina safidy ny mpividy solosaina.
Ny logo an'i Microsoft Windows
Sampana efatra no ananan'i Windows :
Sampana 16 bit, izay mikasika an'i Windows 1 hatramin'ny Windows 3.11 ; izay nitranga tamin'ny 1985 izay mandeha amin'ny PC izay mahazaka 16 bit ihany.
Sampana Windows NT izay nitranga voalohany indrindra tamin'ny taona 1993. Sampana noforonina tanteraka izy ity ary natao ho an'ireo solosaina, lohamilina ary solosaina izay tsy mahazaka PC. Tao amin'ny orinasa io mpandrindra milina io no ampiasaina.
Ireo mpandrindra milina amin'ity sampana ity dia Windows NT, Windows XP, Windows Vista ary Windows 7.
Sampana Windows 9x, sampana mivoatra irery ary tsy miankina amin'i sampana NT izay navoaka tamin'ny taona 1995. Ny mpandrindra milina amin'io sampana io dia Windows 95, Windows 98, Windows 2000 ary Windows Me. Ity sampana ity dia natao hanolo ny sampana 16 bit.
Sampana Windows CE, izay voaforona tamin'ny 1996. Natao ho an'ireo rafitra maivana ary finda. Io no fototry ny mpandrindra milina Windows Mobile ary Pocket PC.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Windows&oldid=1038075"
Dernière modification le 26 Septambra 2021, à 09:06
Voaova farany tamin'ny 26 Septambra 2021 amin'ny 09:06 ity pejy ity.